မီးပြတိုက်: Rules For Being Human
Posted by SLIP in အောင်မြင်ရေး
You will receiveabody. You may like it or hate it but it will be yours for the entire period this time around.
သင်ဟာ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခု ရမယ်။ အဲဒီ ခန္ဓာ ကို သင် ကြိုက်ချင်လည်း ကြိုက်မယ်၊ မုန်းချင်လည်း မုန်းမယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီဘ၀အတွက်တော့ ဒီခန္ဓာကိုယ်ဟာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ပဲ။
You well learn lessons. You are enrolled inafull time informal school call "life". Each day in this school you will have the opportunity to learn lesson. You may like the lessons or think them irrelevant or stupid.
ရောက်သွားတဲ့ ဘ၀မှာ သင်ခန်းစာတွေ အများကြီး ဆည်းပူးရလိမ့်မယ်။ ဘ၀ လို့ခေါ်တဲ့ သင်ရိုး သက်မှတ်ချက် မရှိတဲ့ အချိန်ပြည့် ကျောင်းကြီးမှာ စာရင်းသွင်းထားပြီ။ ဒီကျောင်းမှာ နေ့စဉ်ပဲ သင့်ဘ၀အတွက် သင်ခန်းစာတွေ ဆည်းပူးခွင့် ရလိမ့်မယ်။ ဒီသင်ခန်းစာတွေကို သင် သဘော ကျချင်လည်း ကျမယ်။ အရေးမပါဘူးလို့ ထင်ချင်လည်း ထင်မယ်။ အဓိပ္ပါယ် မရှိဘူးလို့ ထင်ချင်လည်း ထင်မယ်။
There are no mistakes, only lessons; growth isaprocess of trial and error expration. The failed experiments are as machapart of the process as the experiments this ultimately works.
အမှားမရှိပါဘူး၊ သင်ခန်းစာတွေချည်းပါပဲ။ လုပ်ရင်း၊ မှားမှန်းသိရင်း၊ ပြင်ရင်းနဲ့ပဲ ဥာဏ်ပညာ ကြီးတဲ့သူ ဖြစ်လာတာပဲ။ မအောင်မြင်တဲ့ စမ်းသပ်မှုဟာ အောင်မြင်တဲ့ စမ်းသပ်မှုလိုပဲ အသိဥာဏ် ကြီးပွားမှုကို အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။
A lesson is repeated until learned. A lesson will be resend to you in various forms until you have learned it. When you have learned it you can then go on to the next lesson.
သင်ခန်းစာ တစ်ခုကို မကျေညက်ရင် အဲဒီသင်ခန်းစာပဲ ထပ်တွေ့ရမယ်။ သင်ခန်းစာ မရမချင်း ဒီသင်ခန်းစာ ရမယ့် အခြေအနေကိုပဲ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ထပ်တွေ့ရမယ်။ သင်ခန်းစာ တစ်ခုကို သေသေချာချာ နားလည်သွားပြီ သဘောပေါက်သွားပြီ ဆိုလျှင်တော့ နောက် သင်ခန်းစာတစ်ခုကို တက်ရပြီ။
Learning lessons does not end. There is no part of life that does not contain it lessons. I you are alive there are lessons. If you are alive there are lessons to be learned.
ပညာသင်တာ အဆုံးမရှိပါဘူး။ ဘ၀မှာ သင်ခန်းစာ ယူစရာမရှိတဲ့ အချိန်အခါ၊ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားဆိုတာ မရှိပါဘူး။ အသက် ရှင်နေသရွေ့ သင်ခန်းစာ ယူစရာတွေ ရှိနေသေးတာပဲ။
ကြီးပွားချင်လျှင် ကြီးပွားမယ့် အလုပ်ပဲလုပ်
Did you still importing the bags from CHINA in 2019? - Dear meepyatitemptpostmail: Good afternoon,hope this letter can find you well! This is Bruce From Zhejiang Faithful industrial CO.,LTD in CHINA.We ...